HAMBALYO HAMBALYO: Kooxda Banaadir Sports Club oo galabta la guddoonsiiyey koobka horyaalka Soomaaliya… + SAWIRRO – Gool FM
HAMBALYO HAMBALYO: Kooxda Banaadir Sports Club oo galabta la guddoonsiiyey koobka horyaalka Soomaaliya… + SAWIRRO
(Muqdisho) 11 Maajo 2016 – Kooxda kubadda cagta ee Banaadir Sports Club ayaa galabta la guddoonsiiyey koobka Hoyaalka Soomaaliya, oo xilli ciyaareedkan ay ku qaaday Unbeaten, ama iyadoo aan hal kulan laga adkaan.
Kulanka galabta ay ku guddoontay koobka horyaalka ayaa waxa ay la yeelatay naadiga Dekedda, waxaana lagu kala baxay barbaro goolal la’aan 0-0, kulankii ka dhacay garoonka Banaadir.
Waxa uu ahaa Unbeaten-kii labaad oo ay qaadatay kooxda Banaadir SC muddo 3 sano gudahood ah.
Daafaca Mustaf France ayaa kulankiisii ugu dambeeyey u ciyaaray Banaadir Sports Club, maadaama uu ciyaaraha isaga fariistay maanta.
Funaanadaha ay ku dabaal-dageen xiddigaha Banaadir waxaa soo saartay shirkadda Shining Star ee loo soo gaabiyo (s s), oo ah shirkad qalabka ciyaaraha samaysa.
Markii ay ciyaartu soo dhammaaday kaddib ayaa masuuliyiinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waxa ay kooxda Banaadir SC guddoonsiiyeen koobka horyaalka, waxaana sidoo kale goob joog ahaa masuuliyiin ka socotay xiriirka Olompikada Soomaaliyeed ee GOS.
Waa horyaalkii Shanaad oo ay ku guuleysato kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club.
Nasro-kiin Xaashi Nuurre
Maxwell oo ka tagi doona PSG (Ogoow sababta?)
GOOGOOSKA: Liverpool FC vs Chelsea 1-1 (Maqaawiirtii oo is mari waydey)